#Kenya oo maalinta ciidankeeda ka dhigtay maalintii ay soo galeen Somaliya. - Get Latest News From Horn of Africa
#Kenya oo maalinta ciidankeeda ka dhigtay maalintii ay soo galeen Somaliya.
Taliyayaasha ugu sarreeya Milatariga Dalka Kenya ayaa shaaciyay in ay sameeyeen Maalinta Ciidanka Difaaca ee KDF.
Maalintaas ayey saraakiisha Milatariga Kenya ku sheegeen in ay tahay 14ka October oo ah maalintii ugu horreysay ee ay Ciidanka Kenya ka soo gudbeen sohdinta Soomaaliya iyaga oo aan fasax ka heysan dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Difaaca Kenya Robert Kibochi, ayaa sheegay in maalinta 14ka October ay tahay maalinta ay yeelanayaan una gaarka ah ciidanka Difaaca Kenya.
Waxaa uu sheegay in maalintaas lagu xusuusanayo Askarta Kenya ee ku dhintay dagaalka ay kula jiraan AL-shabaab,sidaasna loo aqoonsaday in ay noqoto maalinta Ciidanka difaaca Kenya.
Kenya ka hor faragalintooda sharci darrada ah ee Soomaaliya kuma lug yeelan dagaal dibadda ah,waxaana intii ay ku jireen dagaalka gudaha Soomaaliya la kulmeen guul darrooyin dhinaca furumaha dagaalka ah.
Taliye ku xigeenka KDF ayaa sheegay in dagaalka ay uga jiraan Soomaaliya uu ciidanka Kenya ka caawiyay in ay ogaadaan awooddooda, islamarkaana buuxiyaan meelaha ka banaanaa.
14ka October ayuu sheegay in la xusayo maalinta Ciidanka Difaaca Kenya eek u dhintay Soomaaliya, sidoo kalena ay noqondoonto maalinta gaarka ah ee guud ahaan Ciidanka difaaca Kenya.